Casting Chambre mafana - Serivisy fanariana faty ao amin'ny Chambre mafana - Casting Minghe
Inona no atao hoe casting amin'ny efitrano fandraisam-bahiny?
Fanariana efitrano fatoriana mafana dia midika fa ny efitranon'ny tsindry dia alentika ao anaty metaly ranoka ao anaty lovia fitehirizana hafanana, ary ny ampahan'ny tsindrona dia tsy mifandray mivantana amin'ny fotony, fa apetraka amin'ny fitoeran-drano. Ny tombony azo amin'ny famonoana efitrano mafana dia ny fizotry ny famokarana tsotra sy ny fahombiazany avo lenta; ambany ny fanjifana vy sy ny fizotrany. Na izany aza, ny efitranon-tsindry sy ny totohan-tsindrona dia alentika lava ao anaty metaly ranoka, izay misy fiatraikany amin'ny ain'ny serivisy. Ary mora ny mampitombo ny atin'ny vy amin'ny firaka.
Ny efi-tsindrona dia ampifandraisina amin'ny vavahadin'ny lasitra fanariana faty amin'ny alàlan'ny fantsona gooseneck. Izy io dia mety amin'ny famonoana zinc, casting ary firaka hafa tsy misy ferrous ambany, ary azo ampiasaina amin'ny sehatry ny indostria toy ny fiara, môtô, fitaovana, kojakojan-tokantrano ary fitaovana ao an-trano.
Ny singa fanariana maty rehetra, ao anatin'izany ny hazakazaka famokarana avo lenta indrindra, dia tombony azo avy amin'ny fisian'ireo matihanina amin'ny sehatry ny indostria mahay. Ny mpiasan'ny injenieranay, ny manam-pahaizana momba ny akora ary ny mpanao asa-tanana efa za-draharaha dia miantso mba hahazoana antoka fa manana fahatokisana tanteraka ny mpamatsy Minghe amin'ny loharanon-karenany. efitra fandraisam-bahiny maty fanariana faritra amin'ny indostria isan-karazany, hatrany amin'ny orinasa any Donguan, Sina.
Fa maninona no misafidy serivisy famonoana ho faty ao amin'ny Chambre Minghe?
Mora amin'ny famokarana betsaka - Satria ny famoahana maty dia vita amin'ny bobongolo maty, dia azo atao ao anatin'ny fandeferana sy ny endriny voafaritra izany. Kely na tsy ilaina ny milina ary casting mitovy amin'ny an'arivony no azo vokarina alohan'ny fitakiana fitaovana fanampiny. Ka mangina mora ny manao famokarana betsaka.
Ny fahamendrehana sy ny fahamarinan-toerana - Ny famoahana ny maty dia mamokatra ampahany maharitra sy mateza amin'ny lafiny hafa, ary mitazona fandeferana akaiky. Izy ireo koa dia mahatohitra hafanana.
Tanjaka sy lanja - Ny ampahany maty dia matanjaka kokoa noho ny famolavolana plastika misy refy mitovy. Ny fametrahana rindrina manify dia matanjaka sy maivana kokoa noho izay azo atao amin'ny fomba fanariana hafa. Fanampin'izany, satria ny fanariana die dia tsy misy faritra misaraka mifamatotra na mifatotra, ny tanjaka dia ny an'ny firaka fa tsy ny fizotrany.
Raha te hisafidy a casting maty china mpamatsy, avy eo ny hardware Minghe no safidinao tsara indrindra.Raha manana tetik'asa mampiasa alloys d'empleur ambany ianao dia mety afaka manampy ny MINGHE Hardware. Miankina amin'ny fitakian'ny fangatahana ataonao, ny MINGHE Die Casting Company dia mety hampiasa fanariana maty ao amin'ny efitrano mangatsiaka hisolo ny fizotran'ny fananganana efitrano mafana.
Azafady mba mifandraisa amin'ireto manam-pahaizana momba ny fanariana faty ireto mba hanampiana anao hisafidy ny fomba tsara indrindra hifanaraka amin'ny filan'ny tetik'asa famoahana ho faty, na mangataka teny nindramina tamin'ny tetik'asa famonoana efitrano malalanao anio.
MINGHE Hardware no loharano voalohany ilainao amin'ny fanariana maty sy ny milina nanomboka tamin'ny 1995.
Ny tombony azo avy amin'ny famonoana ho faty ao amin'ny Chambre Hot Minghe
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny famoahana ny efitrano mafana
Safidio ny serivisy fanariana matihanina efi-trano tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny efitrano fandraisam-bahinintsika dia aondrana any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom serivisy maty casting china manome filaharana mateza sy mora vidy mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa famoahana ny efitrano fandraisam-bahiny.